Isifaki seFirefox: iskripthi sokufaka iFirefox kuDebian. | Kusuka kuLinux
I-Zironid | | Aplicaciones, I-GNU / Linux
Lezi zinsuku ezimbalwa zokugcina bengisebenza ngombhalo we- lula (noma ukwenza i-automate) ukufakwa kweFirefox kuDebian. Ngokwami ​​ngincamela ukusebenzisa Firefox kunanoma yini enye, futhi, njengoba abaningi bazi, ayitholakali ezinqolobaneni ze Debian, futhi, mathupha, ngikuthola kancane ... ukufakwa okwenziwa ngesandla okukhathazayo. Ngakho-ke nginqume ukudala lo mbhalo, ukonga isikhathi esithile nokwenza ukufakwa kutethezeke kancane. Okwamanje lo mbhalo ubhalwe ngeSpanishi nangesiNgisi, futhi uyakwazi faka izinhlobo ezingama-32-bit no-64-bit zeFirefox, ngeSpanishi, isiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane nesiJalimane (yize ngithemba ukusekela izilimi eziningi ngokuzayo).
Ngeke ngichaze inqubo, ngoba ngiyibona ingenasidingo (ungabona ukuthi iskripthi senziwa kanjani ngaphandle kwenkinga). Noma ngubani ofuna ukuguqula iskripthi angenza njalo (uma kwenzeka ethola amaphutha noma engeza ukuthuthuka, ngingajabula uma ungawathumela kimi 😀) ngoba ushicilelwe ngaphansi kwePublic Domain.
Kulabo abafuna ukukuzama, ngincoma imibuzo yami elandelayo:
Ingabe ukuthola ngokuzenzakalela kolimi nokwakhiwa kwezakhiwo kuyasebenza? (Ku-PC yami 64 ngeSpanish kuyasebenza)
Ingabe idala isiqalisi kumenyu? (ku Umlingani y I-Cinnamon usebenze kahle)
Ngiyethemba ilusizo kuwe. Noma yimiphi imibuzo, izikhalazo noma iziphakamiso zingashiywa kumazwana, noma zithumele ku-imeyili yami.
Landa isifaki seFirefox kusuka eGitHub
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isifaki seFirefox: iskripthi sokufaka iFirefox kuDebian.
Lapho ngifika ekhaya ngiyazama, yize ngikhululekile kakhulu nge-Iceweasel 20 evela kwi-CrunchBang yami.
Ake sibheke ukuthi ngiyaqikelela yini ukuyifaka kuphakheji ye-.deb bese ngiyifaka ngendlela efanayo naleyo efakwa ngayo i-flash player ku-Debian (okungukuthi, ngesikripthi esincane futhi esinamandla).
Okwamanje angisebenzisi lutho olunye lweFirefox futhi akukho lutho olungaphansi kweSlackware, ngoba ngeDebian ngiye ngazizwa ngikhululekile nge-Iceweasel yami ehambisana neFirefox (ngisebenzisa i- mozilla.debian.net backport, kunjalo) futhi iqiniso ngiyethemba bayifaka egatsheni lokuhlola noma elizinzile ukuze kungafanele ngisebenzise ukufakwa mathupha kweFirefox (kimi, le nqubo inzima kakhulu, kepha nge-Iceweasel angikhathazeki kangako ngokuthumela idatha eMozilla ukuze "ithuthukise itilosi ').
Bheka ukuthi muhle kanjani, uhlanganisile ngesikripthi izinyathelo engizenzayo ngesandla… hahaha Ngiyabonga
Ukusebenziseka okungenzeka kwesikripthi (ikhodi): lapho wenza i-wget ungathatha i-echo nokulala ngaphandle kwecala ukugcina ulayini futhi njengoba unokuhlukahluka kolimi nokwakhiwa ungazisebenzisa izigaba lapho uzibeka khona ukwakha okunye okuguqukayo lokho ikunikeze indlela yefayela, ngokwesibonelo: ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/linux-$XXX/$YYY/firefox-*.tar.bz2
Ngiyabonga futhi ngombhalo!
Okwamanje ngisebenza ekusebenzeni, ngakho-ke ukubamba kwakho kwehla ngokuphelele.
UNkulunkulu sh ... Hhayi-ke amahloni. Ngiyabonga!
Isikripthi silungile, kepha ... ungasho ukuthi sijwayelekile hhayi i-Debian kuphela, okungcono.
Sisanda kuyihlola kuma-ElementaryOs futhi iyasebenza, kepha sithi ingeyeDebian njengoba iFirefox isezindaweni zama-distros amaningi, ngakho-ke umbhalo awudingeki.
Kuya ... angicabangi ukuthi kuyinto ejwayelekile ngoba iFedora ayifaki i-wget ngokuzenzakalelayo (kuzofanela uyifake ngokuhamba kwesikhathi) futhi kungakhethwa ukufaka iphakheji yesistimu ye-mozilla-filey ukuze ukwazi ukusesha ama-plugins. Ngicabanga ukuthi ungashintsha i-wget nge "curl (ikheli) >> firefox.tar.bz2"
ps: opera next (my useragent) kubonakala kungakaveli okwamanje) 😛 imikhonzo!
Akudingeki ube nomdlandla ongaka, yize kufanele ufake i-wget yiphakheji elula yokuthi ngemuva kokuyifaka, iskripthi sesivele sisebenza, ikhodi yomthombo ngokwesibonelo ijwayelekile, ingahlanganiswa kunoma iyiphi i-distro futhi kwesinye isikhathi ukuthembela okuningi kufanele kufakwe , enye into ayisusi enye.
I-PS: Bengingazi ukuthi iFedora ayifakwanga i-wget ngokuzenzakalelayo, lokho akunakuthethelelwa!
Futhi ongakwenza ukwengeza amakhosombe e-LMDE (i-Linux Mint Debian Edition), khipha i-Iceweasel ku-Debian yakho bese ufaka i-Firefox usebenzisa amakhosombe amasha.
Kuyindlela elula engiyithole selokhu kwaphuma i-LMDE, okuyindlela enhle uma ujwayele ukusebenza noDebian futhi ufuna umusa we-Ubuntu. 😉
Nasi isixhumanisi lapho ungabona khona ukuphumula kwe-LMDE: http://packages.linuxmint.com/list.php?release=Debian
Egatsheni lokungenisa banamaphakheji weFirefox.
Isikripthi futhi sihle kakhulu, ngoba uma lawo maposi eke aphahlazeka, uhlala unenketho yokuwusebenzisa 😛
Umnikelo omuhle kakhulu !!!
UDaniel Rivero Padilla kusho
Iskripthi sipholile, ngisanda kusizama nge-debian nge-gnome Shell futhi sifaka kahle, kepha nginenkinga, i-firefox ayivuli, iyavuleka, kepha kuphela lapho ngiyenza njengempande kusuka esigungwini, lapho ngizama sebenzisa isiqalisi ingithumela umyalezo: 'IFirefox isivele iyasebenza, kodwa ayiphenduli. Ukuvula iwindi elisha, kufanele uqale uvale inqubo yeFirefox, noma uqale kabusha isistimu yakho. ", Uma ngiyivula kusuka esigungwini njengomsebenzisi ojwayelekile, ingitshela lokhu kaningana:" (firefox: 3790): Gtk-WARNING **: Akunakwenzeka ukuthola injini yetimu esendleleni eya _module: «pixmap», »ngaphezu kokuvula iwindi ngomyalezo engiwubeke ngaphambili. Futhi uma ngiyisebenzisa njengempande inginikeza umyalezo "Gtk-WARNING ..." kepha futhi ingikhombisa lokhu okunye: "(firefox: 3655): GConf-WARNING **: Iklayenti lehlulekile ukuxhuma kwi-D-BUS i-daemon:
Ayitholanga impendulo. Izimbangela ezingaba khona zifaka phakathi: uhlelo lokusebenza olukude aluthumelanga mpendulo, inqubomgomo yezokuphepha yebhasi yemiyalezo ivimbe impendulo, ukuphela kwesikhathi sokuphendula kuphelelwe yisikhathi, noma ukuxhumana kwenethiwekhi kwephuliwe. » kepha bese ingivulela i-firefox, futhi lapho ivula i-firefox ingikhombisa elinye iwindi lapho isho khona lokhu: «Kuvele iphutha ngenkathi kulayishwa noma kugcinwa imininingwane yokumisa i-firefox. Ezinye izilungiselelo zakho zokucushwa kungenzeka zingasebenzi kahle. ».
Ngisebenzisa iSparkyLinux (kungukuhlolwa kwe-debian nge-lxde nezinye izinto ze-fancys) kepha ngafaka njengedeskithophu yeGnome engiyithande kuze kube manje, angazi noma inkinga ibangelwe iskripthi, iFirefox noma amanye amaphakheji enginawo ohlelweni kodwa ngingakuthokozela uzongisiza ngalokhu.
Ngiyabonga kusengaphambili ngakho konke 🙂
Phendula uDaniel Rivero Padilla
Uma uvule i-Iceweasel, ngeke ikuvumele uvule iFirefox, ngoba ayisebenzi ngasikhathi sinye. Mayelana ne-pixmap, kuzofanele ngibheke ukuthi ifolda / usr / share / pixmaps ikhona yini.
Nginike kabusha i-facepalm lapho ngivala i-IceWeasel futhi ngivula iFirefox, kepha ngiyabonga Umbuzo owodwa futhi, i-IceWeasel ivuselelwe ngenkathi ngivuselela amakhosombe, kepha uma i-Firefox ingafakwanga ngaleyo ndlela, isabuyekezwa ngokuzenzakalela? Ngoba ku-Windows kufanele ngivule kuphela "usizo"> "mayelana ..." ukuze ibuyekezwe.
Uxolo uma imibuzo ingama-noobsters kakhulu kepha angikaphathi kahle i-GNU / Linux.
Ungakhathazeki. Angazi noma ngabe iFirefox ivuselelwa kusuka kumenyu yosizo, mhlawumbe uma uyisebenzisa njengempande uma ungayenza, kepha njengomsebenzisi ojwayelekile angicabangi ukuthi ingakwazi njengoba ifakiwe kumafolda angaphandle kwekhaya lomsebenzisi. Ngicabanga ukuthi iskripthi sizoyibuyekeza futhi.
Iskripthi sizosula inguqulo yamanje bese sifaka inguqulo entsha.
Uma usebenzisa i-Firefox njengezimpande ungayibuyekeza njengoba wenza ku-Windows (yindlela engikwenza ngayo)
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi !!! 😀
Esikhathini esithile esedlule ngenkathi ngise-debian ngangisebenzisa izinqolobane ze-solus os ukufaka i-firefox, kwakulula ngaleyo ndlela 😛
Yize i-Iceweasel uqobo iyiFirefox kepha yenzelwe ukusebenza okungenakuqhathaniswa nokuqina obungeke ukuhlangabezane nakho kwezinye izimfoloko.
Uqinisile, kepha lokho kuyasebenza uma ungasebenzisi ama-plugins amaningi ngoba kimi njalo kufanele ngiqale kabusha ama-plugins we-res, duckduckgo kanye ne-collusion, okucasulayo njalo lapho uvula isiphequluli, esikhundleni salokho basebenza ngokumangalisayo ku-firefox, ngoba kimi leso yisona sizathu esikhulu sokuthi kungani ngiyifakile futhi ngiyisebenzisa.
Kufanele bapholishe leyo mininingwane ngokuhambisana, kepha kimi, ngisebenzisa cishe awekho ama-plugins ukugwema ukuminyana kwesiphequluli.
I-firefox kusiphequluli samahhala?
Ngokobuchwepheshe, akuyona, ngoba igama layo nelogo wuphawu lokuhweba olubhalisiwe. Yingakho amafoloko afana ne-Iceweasel avela lapho.
Uma nginephutha, u-Iceweasel uphume ngoba umjikelezo wempilo kaFirefox ubumfishane kakhulu, futhi uDebian ubewudinga isikhathi eside, ukuze uzinze kakhudlwana, nangokuguqula iFirefox ivumelane nezidingo zabo nokugcina igama elifanayo, bangena enkingeni yezomthetho ngeMozilla (okuthi, ngokombono wami, ayifaneleki).
Mayelana neqiniso lokuthi ayikhululekile ngoba inophawu negama elibhalisiwe, akubonakali kunembile, ngoba, njengephrojekthi ye-Debian (uma ngingenaphutha), bavikela igama labo nelogo ukuze omunye umuntu akwazi ukufinyelela bathi yibo futhi balimaza isithombe senhlangano.
Hmm, kuhle bengilokhu ngazi ukuthi kungenxa yegama ne-logo yeFirefox. Yize into ye-Iceweasel inengqondo, okungukuthi, ukwesekwa.
UJose Luis uyakwazi mtz kusho
Ukuhalalisela kwami ​​okukhulu, uhlelo lwakho belusiza kakhulu, ngiyabonga, ngiyethemba ukuxhumana nawe.
PS Ngingumfundi weComputer Systems Engineering futhi ngingathanda ukuthola izeluleko zakho
Phendula ujose luis can mtz
Ovelele ungikhonze kakhulu! Inkosi ikubusise!
Sishintsha ibhulogi (okwesikhashana?) Iseva, sidinga Impendulo